यो साता कुन राशिलाई सुभ कुनलाई अशुभ ? | सुदुरपश्चिम खबर
यो साता कुन राशिलाई सुभ कुनलाई अशुभ ?
मेष राशि – कला क्षेत्रमा राम्रो साता छ । धार्मिक तथा ऐतिहासिकस्थानको यात्राहोला । नया कुरा सिक्ने अवसर मिल्नेछ । शिक्षासँग सम्बन्धित कामबाट राम्रो आम्दानी हुनेछ । सामाजिक मानमर्यादा पनि बढने देखिन्छ । प्रेम प्रसङ्ग पनि सुखद रहनेछ । मनोरञ्जनात्मक तरिकाबाट कामहरु बन्लान् । बि र्ष ने कुराले सताउन सक्छ सावधान रहनु होला ।
बृष राशि – प्रतिक्षा गरेकाकाम यो साता सम्पन्न होलान् । नया कामबाट पनि केही लाभ हुनेछ । फलामका सामनबाट संयमित भइ काममा लाग्नु होला । आफन्तको सहयोग मिल्नेछ । आफ्नो मात्र निर्णयले कुनै काम गरिहाल्नु उचित छैन । साताको अन्त्यतिर महत्वपूर्ण कामबन्नेछ । नयां मान्छे सगंको भेटले प्रेम प्रसंगको आकर्षण बड्नेछ ।
मिथुन राशि – सानो समस्याले ठूलो रुप लिनसक्छ । झै झ ग डाबाट टाडै रहनु होला ।काम विग्रन सक्छ सावधान रहनु होला । यो साताकुनै पनि कामलाई हल्का नलिनु होला । परिश्रम बढी गर्नु पर्नेछ । श्रम अनुसार फल पनि प्रात्त हुनेछ । कामबाट भने सन्तोष प्राप्तहुनेछ । मन डराउन सक्छ । साताको अन्त्यमा विग्रन लागेको काम सम्पन्नहुनेछ ।
कर्कट राशि – राम्रो साता छ । नयाकामका स्रोत फेला पर्लान । पुरानो काममा मन अधाउला । नया निर्णयमा सावधान रहनु होला । आर्थिक पक्ष सन्तोष जनक रहने छ । पे्रम प्रसंगमा प्रगती हुनेछ । व्यापारमा पनि खुशिको अनुभब गर्नु हुनेछ । छोटो यात्राले मन रमाउनेछ । सोचेका काम सजिलै बन्नेछन् । वैदेसिक व्यवसायमा लाभदायक साता छ ।
सिंह राशि – रमाइलोगर्नमा समय बित्नेछ । कामपनि बन्ने साता छ । व्यवसायीको लागिअझ राम्रो छ । घरपरिवारको समस्या समाधान हुनेछ । यात्राको योगपनि छ, तर यात्रामा सजगता अपनाउनु होला । काममा राम्रा कुराको संकेत देखिनेछ । यो साता समयको ख्याल गरेर आफ्नो दैनिकीलाई अगाडि बढाउनु होला । प्रेम प्रसङ्गमा भने विवादको सामनागर्नु पर्ला ।
कन्या राशि – कामको जशमिल्ने समय छ । प्रेम प्रसंगमा रमाइलो वातावरण सिर्जना होला । नसोचेको काममा खर्च हुनेछ । सवारी साधनबाट आ घा त हुन सक्छ सावधान रहनु होला । कामबाट भने खुशीहुने बेला छ । अरुको काममा खर्चगर्नु पर्ला । नया कामको अवसर आउने छ । स्वास्थ्यमा खरावि देखिएला सावधान रहनु होला ।
तुला राशि – प्रेम–प्रसंमा रमाइलो अनुभव रहने साता छ । मन परेको सामग्री किन्न पाइनेछ । यात्राका क्रममा सावधान रहनु होला । बोलीमा प्रभाव रहनाले काममाप्रगतिहुनेछ । व्यवहशायमा लाभ मिल्ने साता छ । कामहरु सजिलै संग बन्नेछन् । आर्थिक कारोवारमा सावधान रहनु होला । पठन पाठनमा भने अनेक कुराले बाधा पर्न सक्छ ।
बृश्चिक राशि – यो साता विस्वास गरेकाले धो का देलान् । गोप्य कुरा नखोल्नु होला । कामबाट फुर्सद कम मिल्ला । नया काममा खटिनु पर्नेछ । परिवारबाट सहयोग मिल्नेछ । भेलाआदिमा सहभागी बन्नु पर्नेछ । मीठा खानपिनका परिकार प्राप्त हुनेछन् । यो साता प्रेम प्रस्ताव आउन सक्छ । कठिन यात्रामा सरिक हुनुपर्ला ।
धनु राशि – प्रेम प्रसंग सुखद रहने साता छ । नया र रमाइलो स्थालको यात्राले मनमाखुशि छाउला । मान सम्मान प्राप्त हुनेछ । पढाइकालागि अत्यन्त राम्रो साता छ । आत्मविश्वास बड्नेछ । काममा जोश र जागर बढ्ला । आर्थिक समस्या हटेर जानेछ छ । नयाकामको सोच दिमागमा आउनेछ । पुरानो कामलाइ पनि निरन्तरता दिनु बेस हुनेछ ।
मकर राशि – ऐतिहासिक स्थानको यात्रमा रमाइनेछ । प्रेम प्रसङ्गमा घर परिवारको सहयोग मिल्ला । गीत सङ्गितमा रमाइने साता छ । टाढाकोशुभ समाचारले खुशि थप्नेछ । कामका कठिनाइहरु समाधान हुदैजाने छन् । प्रयास गरे अनुसार कामहरु बन्ने साता छ । व्यापार व्यवसाय नाफामा नै रहनेछ । यो साता वादविवादबाट भने जति सक्दो टाढै रहनु होला ।
कुम्भ राशि – अभिभावकको सल्लाह लाभप्रद रहने साता छ । आर्थिक कारोवारमा सजक रहनु होला । बिलाशिताको काममा राम्रौ लाभमिल्ला । दाम्पत्य जीवनअनि प्रेम प्रसंगमा मनमुटावको सम्भावना छ । खानपिनमा सावधान रहनु होला । साथिभाइको सहयोग यो साता सम्झन योग्य रहने छ । काममा मन प्रसस्त मात्रामा जानेछ । परिश्रम बडे पनि साता मनोरञ्जन पूर्ण रहने छ ।
मीन राशि – पुरानो र हीतैसी साथीसँग भेट हुनेछ ।काममा भन्दा घुमघाममा बढी मन जाला ।खराव व्यक्तिपनि संगत हुनसक्छ । सोमवार पछी मानसम्मान पुरस्कार आदिप्राप्तहुने योग छ ।अरुले खुलेर प्रसंशागर्नेछन् । समय तपाईको पक्षमा छ । वौद्धिक कामगर्ने समयछ ।प्रेममा सफलतापाइनेछ । आर्थिक पक्ष सन्तोष जनक रहेनेछ । (gnewsnepal बाट सभार)
तुलसीलाई जल चढाउँदा उच्चारण गर्नुहोस् यो मन्त्र मिल्छ शुभ लाभ !!
स्वास्थ्यकर्मी सङ्क्रमित भए सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने !!